Qoraalka oo badan oo hadda boostada SMS aad waxaa ka buuxa? Si aad u hesho farriimo cusub qoraalka, waxaad u leedahay in ay tirtirto kuwii hore. Si kastaba ha ahaatee, fariimaha qoraalka ah, kuwaas oo u diiwaan-farxad iyo oohin ku saabsan noloshaada. Marka aad tirtirto fariimaha qoraalka ah, kuwaas oo, weligood aad waayi doonto. Waa niyad jab.
Xaaladdan oo kale, waa lagama maarmaan in fariimaha qoraalka ah gurmad ka iPhone in computer ama daruur hore. Markaas waxaad tirtiri kartaa oo dhan oo iyaga ka mid ah sida aad jeceshahay. Si gurmad farriimaha qoraalka aad iPhone, aad leedahay 3 siyaabood oo loo raaco. Hadda, akhri habka kasta, oo ay doortaan mid ka mid ah ugu fiican in la sameeyo iPhone fariin gurmad.
Habka 1. kaabta iPhone SMS / MMS / iMessages 1 Click la MobileTrans Habka 2. kaabta SMS / MMS / iMessages ka iPhone in Computer la Lugood Habka 3. kaabta iPhone Text Messages / iMessages / MMS in iCloud
Habka 1. kaabta iPhone SMS / MMS / iMessages 1 Click la MobileTrans
Waxaa laga yaabaa inaad jeceshahay in aad fariimaha qoraalka iPhone / MMS / iMessages gurmad sida file a elekterikal, si aad si fudud u akhrisan kartaa oo aad u isticmaali caddeyn ah wax. Halkan waa fariin iPhone gurmad qalab xaq u magacaabay Wondershare MobileTrans (Win) ama Wondershare MobileTrans u Mac .
Qalabkani waxa uu aad ku xoojiya sidii ay gurmad oo dhan qoraalka fariimaha, MMS, iMessages la attachements si aad u computer ee 1 click. Waxa kale oo aad soo celin kartaa si aad iPhone ama Android phone markasta oo aad rabto.
iPhone An socda macruufka 5/6/7/8/9
Wondershare MobileTrans ama Wondershare MobileTrans u Mac
A Windows PC ama Mac la Lugood rakibay
MobileTrans Gurmad aad iPhone SMS in file ah oo aad si toos ah ka akhrisan kartaa. Sidaas darteed, haddii aad raadineyso weeyna ah iPhone SMS gurmad fariin qalab kaas oo kuu oggolaanaysa in aad ka akhriyi SMS ah, fadlan ka Wondershare TunesGo . Waxa aad awood u dhan iPhone SMS gurmad, MMS, iMessages la lifaaq computer iyo badbaadiyey sida TXT / HTML / file XML si fudud.
Tallaabada 1. Connect iPhone in computer ah
First of dhan, xiriiriyaan iPhone in computer ah via cable USB ah. Burcad MobileTrans aad kombuutarka Windows ama Mac. Gurmad iPhone SMS ayaa qalab si dhakhso ah loo ogaado doonaa iPhone. Ka dib markii in, waxaad yeelan doontaa suuqa kala hoose.
Tallaabada 2. kaabta fariin qoraal iPhone, MMS oo iMessages
Riix Back Up Your Phone inay soo galaan suuqa kala gurmad. Tag dhexe ee carmalka oo sax farriimaha qoraalka . Ka dib markii in, riix Start Copy fariimaha gurmad iPhone SMS in kombiyuutarka.
Habka 2. kaabta SMS / MMS / iMessages ka iPhone in Computer la Lugood
Sida aad ogtahay, Lugood gurmad ku dhowaad dhammaan faylasha aad iPhone, oo ay ku jiraan SMS, MMS oo iMessages kartaan. Haddii aad raadineyso weeyna qalab si xor ah u sameeyaan iPhone SMS, iMessage iyo gurmad MMS, Lugood idiin yimaado. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u leedahay in la ogaado in Lugood ma ogola in aad eegista gurmad iPhone SMS, iMesages, MMS. Taa ka sii daran, Lugood gurmad file la aqrin. Ma waxaad ka akhrisan kartaa ama u daabac. Hab kasta, si gurmad iPhone iMessages, MMS, iyo SMS, fadlan raac tutorial ah.
Tallaabada 1. Lugood Run on your computer iyo isticmaali cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPhone in kombiyuutarka.
Tallaabada 2. Ka dib markii la ogaado, aad iPhone muujinaysaa ilaa galeeysid bidix ee Lugood.
Tallaabada 3. Under AALADAHA , guji si aad iPhone. Markaas, aad guddi gacanta iPhone la soo bandhigi doonaa oo Midigta.
Tallaabada 4. Riix Kooban oo hoos u furmo suuqa ilaa heli qaybta hayaan. Sax computer Tan iyo guji Back Up Hadda .
Tallaabada 5. Lugood bilaabaan in ay gurmad xogta iPhone aad, oo ay ku jiraan iPhone MMS, SMS, iMessages. Waxa aad qaadataa waqti qaar ka mid ah. Sug ilaa ay timaado dhamaadka. Raadi aad iPhone gurmad meel halkan >>
Habka 3. kaabta iPhone Text Messages / iMessages / MMS in iCloud
Dad badan ayaa comfuseded in iCloud kartaan gurmad SMS on iPhone. Dabcan, waxa ay awoodo. Marka laga reebo SMS, waxa ay sidoo kale kor u taageeray iPhone iMessages iyo MMS. Hoos waxaa ku qoran waa Hanuunki buuxa. I raaca.
Tallaabada 1. Tubada Settings aad iPhone. On Dejinta screen, hoos si aad u hesho iCloud oo ka jaftaa.
Tallaabada 2. gala xisaab iCloud aad. U hubso in network WiFi aad u rogmatay on.
Tallaabada 3. iCloud screen, waxaad arki doontaa walxood oo badan, sida Xiriirada, Notes. Leexo iyaga on haddii aad sidoo kale doonaynaa in aan u gurmad. Markaas, tuubada darsamaan .
Tallaabada 4. Kaydinta & kaabta doorasho oo ka jaftaa.
Tallaabada 5. noqda ee kaabta iCloud oo ka jaftaa Up Back Hadda .
Tallaabada 6. Sug inta uu hannaanka gurmad waa dhameystiran
2 Siyaabaha Cusboonaysii iPhone Si fudud
2 Siyaabaha Soo Celinta iPhone
10 joogaan Most-weydiiyo oo ku saabsan iPhone Update
Dhib ku saabsan celinta iPhone
1 Click si ay u gudbiyaan iPhone in Android
1 Click si ay u gudbiyaan Android inay iPhone
Copy Apps ka iPhone in Lugood
> Resource > iPhone > 3 Hababka la Sameeyo kaabta iPhone SMS